WIFE OF ARAKAN SINGER STABBED TO DEATH_ဓါတ်ပုံရည်ညွှန်းစာသား – သားသမီး သုံးဦး နှင့် ကွယ်လွန်သူ မဥမ္မာထွန်း။ | democracy for burma
WIFE OF ARAKAN SINGER STABBED TO DEATH_ဓါတ်ပုံရည်ညွှန်းစာသား – သားသမီး သုံးဦး နှင့် ကွယ်လွန်သူ မဥမ္မာထွန်း။
tags: Arakan, ARAKAN SINGER, Burma, killed, Ko Doe Ree, Myanmar, Sittwe, WIFE
( Sittwe, 18 June 2013) : The wife of well known Arakanese singer Ko Doe Ree was stabbed to death on Monday in Sittwe, the capital of Arakan, saidafamily source.
Ma Onmar Tun, 32 died after their neighbour U Maung Took attacked her in the evening nearby her residence and she finally succumbed to the injuries.
According to the family source, the popular Arakanese singer and his wife Ma Onmar Tun had altercations with U Maung Took in several occasions before the incident.
On the Monday evening incident, the assailant U Maung Took suddenly stabbed the lady byaknife and fled from the location.
The cremation of Ma Onmar Tun, who is the mother of three children will be held on Wednesday at Manzi graveyard in Sittwe,afamily source disclosed.
ဓါတ်ပုံရည်ညွှန်းစာသား – သားသမီး သုံးဦး နှင့် ကွယ်လွန်သူ မဥမ္မာထွန်း။
စစ်တွေ ၊ ၁၉ ဇွန်လ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင်း ]
ရခိုင်တေးသံရှင် ဒိုးအ်ရီ (Doeree) ၏ ဇနီးကို ဇွန်လ (၁၇) ရက်နေ့ ညနေ ခြောက်နာရီ ခန့်က ထိုးသတ်သွားသူ တရားခံအား အခင်းဖြစ်ပြီး (၂၆)နာရီအကြာ ယမန်နေ့ ညနေ ရှစ်နာရီခန့်တွင် စစ်တွေမြို့ ဆတ်ရိုးကျချောင်း တစ်ဘက်ကမ်းရှိ ဒုက္ခသည်များအိမ်ယာအသစ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
တရားခံ ကိုမောင်တုတ် က ဒိုးအ်ရီ ၏ ဇနီး မဥမ္မာထွန်းအား ထိုးသတ်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် အသွားကိုးလက်မရှိ ကတ်ကြေး နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။ ထိုကတ်ကြေးမှာ ကိုက်ဖြတ်ရန် အတွက် မဟုတ်ဘဲ လက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်အောင် ချွန်ထက်အောင် သွေးထားသော ကတ်ကြေးဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။
တမြန်နေ့က (ကို) ဒိုးအ်ရီတို့မိသားစု နှင့် တရားခံမိသားစုတို့ ကတောက်ကဆ ဖြစ်ကြရာမှ တရားခံကိုမောင်တုတ် (၃၂-နှစ်ခန့်) က (ကို) ဒိုးအ်ရီတို့မိသားစု အိမ်ဝင်းခြံများအား လာရောက် နင်းခြေဖျက် ဆီး သည် အထိဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် (ကို) ဒိုးအ်ရီတို့ ဇနီးမောင်နှံက ရဲစခန်းသို့သွားရောက် တိုင်တမ်းခဲ့ကြ သည့်နောက်၊ အိမ်နီးနားချင်းများဖြစ်ကြသည့် တရားခံ၏ မိသားစုဝင်အများစုတို့ အလျှိုလျှိုပျောက်သွားကြပြီး တရားခံ ကိုမောင်တုတ် တစ်ယောက်သာလျှင် အိမ်ပေါ်တွင် ကျန်ခဲ့သည် ဟု ဆိုသည်။
“အဲသည်အိမ်ပေါ်က မိန်းမနှစ်ယောက်၊ တစ်ယောက်က သူ့မိန်းမပဲ၊ အဲသည် နှစ်ယောက်နဲ့ အဲသည်ကောင်နဲ့ တိုးတိုး တိုးတိုး တိုင်ပင်ပြီး သူတို့အိမ်သားတွေ အိမ်ကနေထွက်သွားကြတယ်။ နောက်ဆုံး အိမ်ရှေ့ တံခါးမကြီးကို ပိတ်တာက သူပဲ။ သူက အကြံနဲ့ကျန်ခဲ့တာ” ဟု ဒိုးအ်ရီ က ဆိုသည်။
ရန်လိုရိုင်းပြနေသည့် (တရားခံ) အိမ်နီနားချင်းများ၏ ရန်မှ အကာအကွယ်ပေးပါရန် အခင်းဖြစ်သည့်နေ့က နှစ်ကြိမ်တောင် ဖုန်းဆက်တိုင်တန်းခဲ့သော်လည်း ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ လာပါတော့မယ်၊ ယူနီဖောင်းလဲနေလို့ပါ ဟု ၄င်းအား ရဲစခန်းက အကြောင်းပြန်သည် ဟု ဒိုးအ်ရီ က ဆိုသည်။
မိမိအိမ်မှ အိမ်သူအိမ်သားများကို ကြိုတင်ရှင်းလင်းထားသည့် တရားခံ ကိုမောင်တုတ်သည် ညနေ ခြောက်နာရီကျော်ခန့်တွင် အသတ်ခံရသူ မဥမ္မာထွန်း နေအိမ်မှ ဆင်းလာသည်ကို မြင်သည်နှင့် (သုံးအိမ်ခန့်အကွာရှိ) မိမိအိမ်ပေါ် ၀ရန်တာပေါ်က ထိုင်ချောင်းနေရာမှနေ လမ်းပေါ်သို့ ကမန်းကတန်း ပြေးဆင်းသွားပြီး မဥမ္မာထွန်း သတိမထားအောင် ကျောပြုကာ လမ်းပေါ်ဦးစွာ ရောက်အောင် နေရာယူထားခဲ့သည် ဟု မျက်မြင်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ယင်းမျက်မြင်၏ အဆိုအရ နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
“မောင်တုတ်ဟာ သူကွယ်ပြီး နေနေတဲ့နေရာကို ဥမ္မာထွန်းက ကျော်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ လှစ်ကနဲ သူ့နေရာကနေထွက်လိုက်ပြီး ဥမ္မာထွန်း ဆံပင်ကိုစုဆွဲပြီး ခေါင်းကို လှန်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ရင်ချင်းအပ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်နေတဲ့ ဥမ္မာထွန်းရဲ့ ရင်ညွန့်ထဲကို (ကတ်ကြေးနဲ့) ထိုးထည့်ပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီတစ်ချက် နဲ့တင် ဥမ္မာထွန်း ခွေကနဲ အိကျသွားတာပဲ။ လဲသွားတဲ့ ဥမ္မာထွန်းကို ခွစီးပြီးတော့ သုံးလေးချက်လား လေးငါးခြောက်ချက်လား အပေါ်ကနေ ထပ်ထိုးတယ်” ဟု အဆိုပါ မျက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုသည်။ ထိုသူမှာ ဖြစ်စဉ်ကို အိမ်အပေါ်ထပ်မှ လှမ်းကြည့်မိလျက်သားဖြစ်နေသည့် အိမ်နီနားချင်း တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ဥမ္မာထွန်း၏ နောက်ဆုံးအော်သံကို ဒိုးအ်ရီ မကြားလိုက်။ သို့မဟုတ် ဥမ္မာထွန်းမှာ အော်ဖို့ အချိန်ပင် မရလိုက် ဟု ယူဆရသည်။
“ကျွန်တော် ကြားလိုက်တာက အလန့်တကြားနဲ့ အော်လိုက်တဲ့ (အနီးအနား ၀န်းကျင်က) ယောင်္ကျားတွေရဲ့ အလန့်တကြား အော်သံ တွေပဲ။ ကျွန်တော် အိမ်ကနေ ပြေးဆင်းသွားတာနဲ့ ဥမ္မာထွန်းဆီကို ရောက်သွားတာ မိနစ်ပိုင်းတောင်မကြာဘူး။ ဘယ်လိုမှ မကာကွယ်နိုင်လိုက်ဘူး။ လမ်းပေါ်မှာ လဲကျနေတဲ့ ကျွန်တော့် ဇနီးကိုပဲ တွေ့ရတော့တယ်။ ဟိုကောင်က တစ်ခါတည်း တန်းပြေးသွားပြီ” ဟု ဒိုးအ်ရီက Coral Arakan News အား ပြောကြားသည်။
အခင်းဖြစ်ပြီး ဆယ်မိနစ်ခန့်အကြာတွင် အသတ်ခံရသူ၏ ၇-တန်းကျောင်းသား သားကြီးဖြစ်သူမှာ ကျူရှင်မှ ပြန်လာပြီး ထိုလမ်းအတိုင်းဝင်လာသည်ဖြစ်ရာ ထိုကလေးမှာ သေဘေးမှ သီသီကလေး လွတ်သွားခြင်းပင် ဖြစ်သည် ဟု အိမ်နီးနားချင်းများက ဆိုကြသည်။
တရားခံအား ဒုက္ခသည်အိမ်ယာစခန်းတွင် ဖမ်းမိသည့်အချိန်တွင် တရားခံ၏ ဇနီးနှင့် သမီးတို့အား စစ်တွေ အထက (၃) ရှေ့လမ်း ချတောပါရာလမ်းကြားအိမ်တစ်အိမ်သို့ (တရားခံက) တင်ကြို ရွှေ့ပြောင်းထားပြီးဖြစ်နေသည် ဟု ဆိုသည်။
တရားခံ မောင်တုတ်မှာ ယခင်ကလည်း စစ်တွေမြို့ ကျောင်းတက်လမ်းရပ်ကွက် တစ်နေရာတွင် ကလးတစ်ဦးထံမှ ဆွဲကြိုးဖြတ်ပြေးသဖြင့် ပြစ်မှုကျခံရဖူးသည် ဟု ဆိုသည်။
နာမည်ကြီး ရခိုင်တေးသံရှင် ဒိုးအ်ရီမှာ ပရိုဖက်ရှင်နယ် တက်တူးထိုးပေးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ စစ်တွေမြို့ သင်္ကြန်အတွင်း ဒိုးအ်ရီ ၏ တေးသံဖြင့်သာ လွှမ်းမိုးနေခဲ့သည်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာ စစ်တွေမြို့ မိဇရပ်ကွက် ကုလားချောင်းအပိုင်းမှာ အစဉ်အလာကပင် ဇက်ရဲလက်ရဲသမားများ ပေါများရာနေရာဖြစ်သည်။
သေဆုံးသူ မဥမ္မာထွန်း၏ ရုပ်ကလပ်အား စစ်တွေ ဆေးရုံကြီး ရင်ခွဲရုံမှ ယနေ့နေ့လယ်တွင် အာကျိတ်တော်ကုန်း သို့ပို့ဆောင်၍ မြေမြှုပ် သင်္ဂြိုလ်မည် ဟု သိရသည်။
သေဆုံးသူ မဥမ္မာထွန်းတွင် ခင်ပွန်း (ကို)ဒိုးအ်ရီ အပြင် ခုနစ်တန်းအရွယ် သားတစ်ယောက်၊ ခြောက်တန်းအရွယ် သားတစ်ယောက် နှင့် သူငယ်တန်းအရွယ် သမီးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
( Coral Arakan News အတွက် ဟန်မောင်သိန်း ရေးသားသည်။ )
← MYANMAR BURMA SAYS NO TO HIRE WHITE ELEPHANT TO THAILAND
KNPP Statement KNPP & GOVERNMENT PEACE TALK →